स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ मशान्तभित्र गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको सुझाव
नेपाल जनस्वास्थ्य संघ सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा ढुङ्गाना, ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन
गौतमबुद्ध विमानस्थल निरीक्षण गर्दै मन्त्री आलेले भने,- कुनै हालतमा बुद्धजयन्ती अगावै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ
धनगढीमा माघ १२ गते मृत फेला परेका प्रहरी हवल्दारलाई कोरोना भएको पुष्टि
कर्मचारीको अभाव झेल्दै अछामको रामारोशन गाउँपालिका: ग्रामीण क्षेत्रमा कर्मचारीहरु जान भने मान्दैनन्
नेपाल परिवार दलको पहलमा धनगढी १ का बृद्धा,गरिब, एकल महिलालाइ ५० पिस ब्लाङ्केट वितरण
बाजुरामा माइन्युट च्यात्ने वडाध्यक्षद्वयविरुद्धको मुद्दा नगरपालिकाले लियो फिर्ता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन: सञ्चालनको सुरसार छैन्
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघद्वारा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चौधरीलाई सम्मान
शनिबार, साउन ३०, २०७८ मा प्रकाशित
म महापागल – विश्व अधिकारी
तिमी नै मरो अनि चराचर जगतको सृजना, भुमिका र अन्त्यको कारक हौ । म लगायत सारा सृष्टीको उत्पत्ती र समाप्ती तिम्रै अति सामान्य र नियमित प्रकृया हो । त्यसैले जसलाई जति जटिल लागे पनि तिमीले दिएको भुमिका जति सरल र सहजतताका साथ निर्वाह गर्न सक्यो त्यति नै मेरो जन्मबाट मृत्युसम्मको यात्रा सहज हुनेछ । तमीले हरेक सृजनामा अनेक रंग भरेका छौ त्यसैले त यो संसार मायावी छ, अचम्म छ, अद्भूत छ । असतोमा सद्गमय, तमसोमा जोतिर्गमय, मृर्त्योत्मा अमृतम् गमय । यति आत्मसात् गर्न सक्ने यो जूनी र जीवनी पनि तिम्रै कृपा हो ।
एक दिन म मर्ने छु । त्यस अघि तिमीसंगको साक्षात्कार र एकाकार नै मेरो अन्तिम प्रयास रहने छ । मलाई थाह छ सफल नभएसम्म मरो पुनरागमन हुनेछ । म स्पष्ट छु । यो अहंकार होईन प्रेमबाट मात्र सम्भव छ । यही अन्तिम विकल्प हो । अन्तिम लक्ष्य हो सरा जाती प्रजातीको । फरक यति छ कि म विशिष्ट छु किन भने तिम्रो संरचनाको म एक मात्र विवेकयुक्त प्राणी हुँ । म मान्छे हुँ । जीवन बाच्नका लागि खाना मरो पहिलो आवश्यकता हो । तर बिडम्बना यस्तो भएको छ कि ८४ लाख जूनीमा अन्य सबै प्राणीलाई आफ्नो खाना के हो भन्ने प्रष्ट छ । आधुनिक मानव आज पनि सोच्दैछ, खोज्दैछ र भोग्दैछ मेरो खाना के हो भनेर । मेरा बुवाले पिठ्यूमा १५ दिनको बाटो चामल बोकेर आधा घण्टा पानी अनि २, ३ घण्टा दाउरा खोजेर डोटीमा पढेको रे । आज एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर या पसलमा गएर म मेरो खानाको जोहो गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदा या खाना नै नपाएर मर्नै पर्ने अवस्था नहुँदा पनि तिम्रो संरचनामा मान्छेको गति देखेर म महापागल भा को छु ।
तिम्रो सृष्टीमा यहाँ कोही पाएर पागल भएका छन् कोही गुमाएर पागल भएका छन् । कोही प्रसंशालो पागल भएका छन् कोही निन्दाले । कोही प्रेममा पागल कोही धोकामा । कोही जितेर कोही हारेर पागल। कोही धेरै सुतेर पागल कोही सुत्नै नसकेर पागल । कोही आशामा पागल को निराशामा पागल । कोही भावमा पागल कोही अभाबमा पागल। कोही ईमान्दार भएकोले पागल कोही बेईमान भएकोले पागल। कोही गिराउन पागल कोहि गिर्न पागल । कोही हसाउन पागल कोही रुवाउन पागल। कोही जितेर पागल कोही हारेर पागल। कोही राम्रो खबरले पागल कोही नराम्रो खवरले पागल। किन सब पागल छन् ?
म महापागल भा को छु
काँग्रेस सुदूरपश्चिम सभापतिका लागि लोकप्रिय नेता नरनारायण शाह (मनु)
कविताः त्यो रहर !
बझाङको बुँगल नगरपालिकामा चितुवा मृत अवस्थामा फेला
सुदूरपश्चिमका ५ जना प्रहरी सम्पर्कविहीन, ७ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह,सेवाबाट हटाउने चेतावनी
कैलालीमा विप्लव कार्यकर्ताको चन्दा आतंक, धम्की दिँदै लाखौँ असुली
कैलालीमा ट्रकसँग हायस ठोक्किएर दुर्घटना,१६ जना घाईते
कञ्चनपुर गड्डाचौकी–चिसापानी राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम सुरु
धनगढीमा मोवाइल चोरी गर्ने प्रहरीलाई कडा कार्वाही नगरीए कडा कदम चाल्ने चेतावनी